Kukuvadza kwekunyanyisa formaldehyde mumotokari mat
Dhata kubva kuNational Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) inoratidza kuti tsaona dzemumigwagwa dzinokonzerwa nemateti emota dzinowanzoitika. Zvinofungidzirwa kuti kameti kadiki kemotokari kanogona zvakare kuunza njodzi inouraya uye hakufanire kufuratirwa.
Sangano reInternational Agency for Research on Cancer (IARC) rakaburitsa chirevo chakaratidza kusvibiswa kwemhepo seboka rekutanga rezvirwere zvevanhu. Mumushumo, IARC yakaratidza data rekuti muna 2015, huwandu hwevakafa kubva pagomarara remapapu hunokonzerwa nekusvibiswa kwemweya hwasvika mazana maviri negumi nemaviri. Asi pachokwadi, dambudziko rekusvibiswa kwemweya haringori kunze chete, asi zvemukati uye zvemumhepo zvinosvibisa zvakare zvakakomba, ngatitaurei nezve kukuvadzwa kwevanhu kunokonzerwa nemameti emota ane yakawandisa formaldehyde!
Formaldehyde yakaonekwa seyekutanga-kenza carcinogen muna 2006. Maitiro ekubvisa formaldehyde nekukwirisa mhando yemweya rave iri nyaya yehutano yatisingakwanise kufuratira. Zvisinei, zvinogona kutaurwa kuti formaldehyde, iyo inokanganisa muviri wemunhu muhupenyu, iri kwese kwese. Zvinhu zvinobatanidzwa zvinosanganisira midziyo, uriri hwehuni; zvipfeko zvevana, zvisina-iron shati; kutsanya chikafu manoodles, mupunga manoni; blistered squid, makomkoro egungwa, zvivharo zvemombe, shrimps, uye kunyange mota. Hazvina kuoma kuona kuti zvipfeko, chikafu, pekugara uye chekufambisa-izvo zvinhu zvina zvakakosha muhupenyu hwedu, formaldehyde yakave yakabatanidzwa. Iyo inowanikwa kwese formaldehyde inoita kuti vanhu vanetseke.
Zvinoenderana neyakajairwa nyika, huwandu hweiyo formaldehyde inoburitswa mumotokari haifanire kunge iri pamusoro pe0.08 mg; kana ikasvika pa0-2-2.0 mg, 50% yevanhuwo zvavo vanogona kunhuwidza kunhuhwirira; kana ikazosvika 2.0-5.0 mg, maziso uye trachea zvinotsamwiswa zvakanyanya, zvichikonzera kukuvara kwakanyanya. Kuhotsira, kukosora uye zvimwe zviratidzo; kusvika 10 mg kana kupfuura, kufema kunetseka; inosvika 50 mg kana kupfuura, inokonzeresa chirwere chakakomba senge pneumonia; Uye zvakare, formaldehyde inogona zvakare kukanganisa kubereka, semuenzaniso, kwenguva refu inhalation ye formaldehyde mumadzimai ane nhumbu anogona kukonzera kukanganisa kwe fetus uye kunyange kufa; kwenguva refu inhalation ye formaldehyde muvarume inogona zvakare Inogona kutungamira kune zvakakomba mhedzisiro sekushaya mbereko uye kunyangwe rufu.
Muna 2010, yekutanga National Indoor Air Quality Op uye Health Academic Symposium yakaburitsa dhata inoshamisa: Huwandu hwevakaurayiwa hunokonzerwa nekusvibiswa kwemhepo mukati menyika hwasvika 111,000 gore rega rega, uye avhareji yevanhu makumi matatu nevapfumbamwe vanotyorwa mazuva ese.
Muchokwadi, kungave iko kushongedzwa kwemotokari nyowani kana mota dzekare, kune zvakasarudzika zvakasara zvezvinhu zvinokuvadza, kunyanya zvinosanganisira benzene, xylene uye zvimwe zvinoteedzana zvebenzene, formaldehyde, acetone uye nezvimwe zvinokuvadza zvinhu, izvo zvinokonzeresa kusvibiswa kwemhepo mumota. Kunzwa kufemerwa mukati memuviri wemunhu, zviratidzo zvenguva pfupi senge kusanzwisisika huro, dzungu, kuneta, kurwara kweganda, kugona kutonhora, kuderera kwekuzvidzivirira, uye leukopenia, nezvimwewo, zvinokonzeresa hosha huru dzakadai sekenza mushure memakore mashoma, zvichitungamira pakurasikirwa nemufaro kwehafu yechipiri yehupenyu.
Mataiti epasi pemota anofanirwa kubhadhara zvakanyanya kuhunhu achitarisa pane zvinobatika. Chete nehunhu hwakanaka ndipo hutano hwedu hunovimbiswa. Zvakare, mota dzakaenzana nemusha wedu wechipiri, uye mamota epasi pemota akaenzana nehuriri hwepamba. Ivo vanofanirwa kuve vane nharaunda uye vasina hunhu, Nyore kuchenesa, hapana mabhakitiriya.
Tinoda kuunza mateki emota ari nani kune varidzi vemota. Imwe chete-chidimbu jekiseni-rakaumbwa yakazara TPE mameti inogona kuunza zvechokwadi yakasununguka nharaunda uye isina hwema-isina kutyaira ruzivo.
Sewe nhengo yepasi, kune ramangwana kusimudzira kwepasi, isu takazivisa 100% inogadziriswazve TPE zvigadzirwa zvine hushamwari uye tikashandisa zvigadzirwa zvavo kumiti yemotokari zvigadzirwa kuchengetedza zvakatipoteredza nharaunda, kugadzirisa matambudziko ezvakatipoteredza, uye kudzikisa mutoro wezvakatipoteredza. Kusvibisa. Zvinotarisirwa kuunza hutano hwakanaka uye hwakachengeteka kutyaira kune varidzi vemota uye nekupa chakasimba mupiro mukudzivirira kwezvakatipoteredza.